इपिएस नेपालीको लागि आशा गर, भर नपर
प्राकृतिक सम्पदामा विश्वकै धनी मुलुक नेपाल आर्थिक रुपमा संसारकै अतिगरिव मुलुकमा पर्दछ । भौतिक श्रोत साधन जति भएपनि त्यसको सही प्रयोग गर्न नसके ती बहुमूल्य वस्तुको कुनै मुल्य नै नहुने कुराको ज्वलन्त उदाहरण नेपालबाट विश्वका अन्य मुलुकले लिने गरेका छन् । देशको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संयन्त्र नै भ्रष्ट र अनैतिक भएका कारण देश र देशमा बस्ने नागरिकहरु त्यसको प्रत्यक्ष शिकार बन्न पुगेका छन् ।
देशमा भएका बहुमूल्य जडीबुटी, महङ्गा रुख बिरुवाहरु, खनीज, ढुङ्खा, वालुवाजस्ता वस्तुहरुको व्यापक चोरी तस्करी हुनु, राजनीतिकको खोल ओडी संस्थागत रुपमा चोरी तस्करी, चन्दा आतंक, भ्रष्टाचारको चंगुलमा देश र जनतालाई चुलुम्म डुबाएर युवा जनशक्ति विदेश पठाउन सक्रिय समग्र राज्य सञ्चालकहरुको कारण नेपाल अपराधीहरुको अखडा त बन्दै छैन भनी शंका गर्नु पर्ने अवस्था आइरहेको छ । नातावाद, कृपावादले योग्य, इमान्दार तथा मेहनती युवापुस्ता विदेश पलाएन हुँदैछ, यो क्रम तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । के नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम युवाशक्तिलाई विदेश धपाएर बुढाबुढी माथि राज्य सञ्चालन गर्ने हो त ?
के नेपालमा बाँच्नको लागि कुनै विकल्प नै छैन ? के विदेश जानु नै नेपालीको अन्तिम विकल्प हो त ? वर्षौदेखि भारतीय तथा बेलायतीको नोकरी चाकरी गरेर नपुगेर संसारकै अति जोखित तथा द्धन्द्धग्रस्त मुलुकमा नेपाली गइ रोजीरोटी गरेका छन् । यो नेपालीको रहर कि बाध्यता । सिमित व्यक्तिहरु धेरै धन आर्जन गर्ने लोभमा विदेश पलायन भएका छन् तर ठूलो संख्यामा खाडी मुलुकमा लाखौंको संख्यामा निकै कम तलबमा निकै जोखिमपूर्ण काम गरी घरको सामान्यजिवन गुजारा गरेका छन् ।
केही समययता मिडियामा चर्चाका आएका घटनाहरु २० लाखसम्म रकम खर्च गरी गैरकानूनी तरिकाले अमेरिका जाने गरेका खबर सुन्दा हामी जस्ता सामान्य नेपालीलाई अचम्म लाग्छ । मेहनत गर्नेका लागि २० लाख निकै ठूलो रकम हो । त्यति ठूलो रकम विदेश जान खर्च गर्नेको सम्पत्ति कति होला । यदि पैसा कमाउने हो भने यो रकमलाई नेपालमा नै बसेर लगानी गरे सामान्यजीवन बिताउन कतै जानै पर्दैन । हामी नेपालीलाई किन यस्तो भ्रम प-यो, विदेशमा पुग्दा बित्तिकै पैसाको रुख हुन्छ र टपटप टिपी ल्याउन पाइन्छ जस्तो । विदेशमा दुःख गरी स्वदेश फर्कनेले यर्थाथ कुरा लुकाउनुले पनि स्वदेशमा काम नगर्ने, जसरी पनि विदेश जाने र जस्तोसुकै काम गर्ने भन्ने मानसिकता हावी भएको छ । यसको बिस्तारै न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ ।
यतिबेला नेपाली सञ्चारमाध्यममा कोरियापिडितहरुको चर्चा चलेको छ । एक पटक अमेरिकी डिभिले धेरैको घरबार बिगारेजस्तै अहिले कोरियाले पनि धेरैको सपना चकनाचुर पारेको छ । खाडी मुलुकको तुलनामा कोरियामा आम्दानी धेरै हुने कुरा साँचो हो तर शिक्षित युवाहरुको गन्तव्य भने होइन । कोरिया कस्तो मुलुक हो, कस्तो व्यक्तिले कोरियामा काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको जानकारी नेपालमा राम्रोसँग सुचित हुन नसक्नु नै धेरै युवाको टाउको दुखाइ बनेको छ ।
कोरिया यस्तो मुलुक हो (जहाँ नेपालमा असारमा भन्दा पनि बढी मेहनतसँग काम) जहाँ रातदिन नभनी कडा मेहनतका साथ काम गरेर देशको अर्थतन्त्र सुधार गरेको देखिन्छ । स्वस्थ र मेहनती व्यक्तिले राम्रो ठाउँ पायो भने मासिक १ देखि डेढ लाखसम्म कमाउन सक्छ तर सबैमा यो लागू हुँदैन । कोरियनको रुखो व्यवहार तथा कडा र जोखिमपूर्ण काम गर्न नसकेर धेरै युवायुवती कम्पनी छोडेर चर्चमा महिनौंसम्म बसी घर न घाटको पनि भएका छन् ।
लामोसमय उभिएर काम गर्नु पर्ने भएकोले कम्मर, घुँडा तथा शरीर दुख्ने समस्या नभएका कमै होलान । शरीरमा घाउ, चोट लाग्नु सामान्य जस्तै हो । भाषाको समस्या, शारीरिक दुर्वलता आदिले कोरियामा काम गर्न गा-हो छ । धेरैले पैसासँगै रोग बोकर स्वदेश फर्केका छन्, कमाएरको पैसा डाक्टरलाई बुझाउन नपुग्ने अवस्थामा पनि स्वदेश फर्केका कैयौं छन् । त्यसैले कोरिया आउनुहोस् तथा मानसिक तथा शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त भएर । अनि गर्नै नहुने अर्को गल्ती चाँही यो हो कि उड्ने पक्का नहुँदै गरेको व्यवसाय, जागिर तथा अध्ययनलाई बीचैमा छोड्न हुँदैन् । केवल सम्भावनाको भरमा गरेको काम छोड्नु बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसैले कोरियाको इपिएस आशा गर, भर नपर भएको छ ।